Mareykanka oo xayiraad saaray shirkado Ruushka iyo Shiinaha laga leeyahay - BBC News Somali
Mareykanka oo xayiraad saaray shirkado Ruushka iyo Shiinaha laga leeyahay
Image caption Kuuriyada Waqooyi ayaa ku adkeysaneysa in hubka nukliyeerka ay isku difaaceyso
Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogay shirkado laga leeyahay dalalka Ruushka iyo Shiinaha, iyo shakhsiyaad kale oo uu ku eedeeyay inay gacan ka geystaan barnaamijka hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi.
Arrintan ayaa imaaneysa kaddib markii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, oo ay ku jiraan Ruushka iyo Shiinaha, ay u codeeyeen in cunaqabateyn dheeraad ah la saaro xukuumadda Pyongyang.
Waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa sheegtay in tallaabadeeda ay cadaadis ku kordhin doonto Kuuriyada Waqooyi, balse waxaa tallaabadaasi ka carooday Shiinaha.
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson, ayaa dhanka kale, ku ammaanay Kuuriyada Waqooyi is gaabinteeda beryahan.
"Kama hayno wax tijaabo hub ah ama ficillo faduul ah dhanka Kuuriyada Waqooyi tan iyo intii la dhaqan geliyay heshiiska Golaha Ammaanka ee QM," ayuu yiri.
Tani ayuu sheegay inay waddada u xaari karto wada hadallo dhex mara labada dal.
Go`doominta Kuuriyada Waqooyi
Xafiiska Mareykanka ee xakameynta hantida dibadda ayaa cunaqabateyn saaray 10 shirkadood iyo lix qof.
Tallaabadan ayaa micnaheedu yahay in shakhsiyaadka iyo shirkadaha Ameerikaanka ah aysan wax ganacsi ah la sameyn karin shirkadahaas.
Shiinaha ayaa jawaab kulul ka bixiyay arrintaasi, wuxuuna ugu baaqay Mareykanka inuu deg deg u saxo khaladkiisa ah ciqaabta shirkadaha Shiinaha.
Tijaabooyin hub oo is daba joog ah oo Kuuriyada Waqooyi ay bilihii ugu dambeeyay sameyneysay - iyo hanjabaado ay ku soo celcelisay oo ahaa inay fulin doonto tijaabadii lixaad ee hubka nukliyeerka - ayaa sii hurisay xiisadda u dhaxeysa Pyongyang iyo Mareykanka.
Kuuriyada Waqooyi waxaa ka careysiiyay dhoolla-tuska millatari ee ay sanad walba si wada jir ah u sameeyaan Mareykanka iyo Kuuriyada Koofureed, waxayna ku hanjabtay inay gantaallo ku tuuri doonto jasiiradda Mareykanka ee Guam ee ku taalla Koofurta Pacific-gga.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, ayaa isagana ugu hanjabay xukuumadda go`doonsan inuu ku qaadi doono dagaal aysan weli dunidu arkin.